ड़ा केसीलाई बचाउने कि, २० हजार नक्कली डाक्टर उत्पादन गर्ने ? — Motivate News
Posted on November 30, 2016 by motivate news
काठमाडौँ – युवा सबैलाई बकम्फुसे कुरा गर्दैमा फुर्सद छैन्, उनीहरु खाली नेपाल त सतिले सरापेको देश हो यो, यहाँ कसैले केह ीगर्न दिदैन भनेर टारिरहेका छन् । कसैले नेपालमा केही सम्भावना छैन भन्दै विदेशको मुख ताकिरहेका छन् भने कोही गुन्डागर्दि गर्नमा व्यस्त छन् । यूवाहरुमा राजनीति त झन् सोच्यो कि मान्छे बिग्री हाल्यो भन्ने सोच नेपालका राजनितिक नेताहरुले गर्दा विकास भएको छ ।
राजनिती त झन् सबै भन्दा ठुलो फोहोरी खेल हो भन्दै स्कुलबाटै सिकाएको छ त व्यवहारमा पनि नेताहरुले त्यस्तै देखाउका छन् । अनि आजकलका बेवकुफ युवा समूह POLITICS IS A DIRTY GAME भन्दै फेसबुक मा पोस्ट गर्नमै मस्त छन् ।
किन यसो भनियो ? किन ९८५ युवाको मुखबाट यहि जफाव आउछ ?
किनभन्दा अहिलेका राजनीतिज्ञहरुलाई भित्र भित्रै डर छ, भित्र भित्रै पोलेको हुन्छ । कि कतै आफू भन्दा योग्य मान्छे पो फुत्त राजनीतिमा आइ हाल्छ कि ? यदि कोही योग्य युवा राजनीतिमा आइदिइ हाल्यो भने, उनीहरुको त जहाज नै डुब्ने अवस्था आउछ । आफ्ना र भए भरका आफन्त सबैको मागि खाने भाडो, गरि खाने भाडो र जिबिका चल्दै आएको भाडो भनेकै राजनीति हो र राजनीतिमै बाँच्ने यी भरौटेहरुलाई रात भरि निन्द्रा लाग्दैन ।
हैन भने खै त आजको दिनसम्म कुनै नेतालाई सोधिदैन यहाँ कि उसले त्यो अकुत सम्पत्ति कसरी कमायो ? आम्दानीको कुनै तथ्यांक छ ? कठै बिचरा कहाँ बाट हुनु १ गरेर खान त यिनले कहील्यै जानेनन् ।
यदि सक्षम युवाको कुरा कुनै मिडियाले जोड लगाएर फुकिदेला भन्ने कुरामा पनि धेरै चिन्तित हुन्छन कारण एउटै के हो भने युवाको राष्ट्र प्रतिको प्रतिबद्धता, इमान्दारिता र योग्यता, युवाको स्वस्छ मन र गतिशील पाइलाका अगाडी आफु बेइमान, अयोग्य , अपारदर्शी, गुलाम र आफ्नो लुलो खुट्टा कमाउछ कि भन्ने डर हर हमेशा रहीरहन्छ र अर्को कुरा जनताबाट आफु पत्तासाफ हुन्छु कि भनेर रातोदिनको पिरलो भै रहन्छ यिनीहरुलाई। त्यसैले मिडिया लाई पकेटमा राखेर कहिले कुनै पनि प्रकारको राम्रो खबर बाहिर आउनै दिदैनन ।
युवाहरुले हिजो अस्ति नै प्रमाणित गरिदिइसके कि युवा जागे भने कसैलाई छोडदैनन् भनेर । प्रसङ्ग लोकमानको सार्बजनिक पद वहाली भएको ३ महिना भित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम । उनको अगाडी बोल्ने र उनको सम्पत्तिको हिसाब माग्न त परि जाओस, अख्तियारको कार्यालय टंगाल आयो भने पछि मुन्टो नै अर्का तिर फर्काएर गाडीमा हुइकिन्थ्ये हाम्रा नेताहरु । तै चुप र मै चुपको यो राजनीतिमा एक अर्का देखि सबैलाई डर थियो । विवेकशील नेपाली युवाहरुले ठुलो शाहसका साथ लोकमानकै सम्पत्ति विवरणको माग गरे । डाक्टर गोविन्द केसीले लोकमान भष्ट्राचारको केन्द्रबिन्दु हुन् र उनलाई महाअभियोग लगाउन पर्छ भनेर अनसन बस्दा डाक्टर के सी लाई पागल भन्न पछि परेनन् लोकमान ।
तर युवाको लगातारको खबरदारी, उनले गरेका ब्रम्हलुटको पर्दाफास गर्दै प्रमाणहरु जुटाए पछि र लोकमानले आफूलाई लोकतन्त्रको राजा सम्झेर सबलाई अटेर गर्न थाले पछि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यो शाहसिक कामबाट सबै युवाले अब सोच्ने बेला भएको छ ।
अव नेताहरुका कालाकर्तुत जब लोकमानको झैँ पर्दाफास हुन्छन तब हामीले बुझ्छौ कि हामी पढेलेखेका भनाउदालाई कस्ता मान्छेले राज गरिरहेका रहेछन भनेर । देशलाई हाक्न न त यिनले एजम नै गरेर आएका हुन् न त राम्रो काम गरेर नै देश चलाइरहेका छन् । सबका सबको आ आफ्नै कर्तुत तपाई हाम्रो अगाडी छर्लङ्ग छदै छन् । बरु तपाई हामीमा त अलिकति भए पनि असल बानी छ भने, देश प्रतिको माया छ, आफ्ना नेपाली दाजु भाई प्रतिको सद्भाव छ र सम्पूर्ण जातजाति र धर्मवालम्विको एकता छ । यिनीहरुमा त त्यो गुण पनि हराइसक्यो । आफ्नो स्वाभिमान त यिनीहरुले पैसा र शक्तिकोलागि वेचिसके ।
भर्खरको उदाहरण हेरौ, गगन थापा कत्ति उचालिन्थ्ये मन्त्रि नहुनजेल । अहिले स्वास्थ्य मन्त्रि भए पछि चुइक्क गरेको छैनन जब कि आज डाक्टर गोविन्द के सी को अनसन को १७ औ दिन पुगी सक्यो । तपाइलाई जस्तै मलाई पनि लाग्थ्यो, गगनले केहि गर्छन है अब भनेर तर उनि पनि त्यहि घैटे कुमारका साथीनै बनेर देखाई दिए जब कि त्यो सब कुरा नेपाली जनताले विर्शिनै लागेका थिए ।
हामी युवाले अब अझै कति प्रमाणहरु कुर्दै बस्ने ? अहिलेका शासकहरु तपाई हामी भन्दा धेरै कम्जोर छन्, र यिनका खुट्टाले अब राम्रोसंग टेक्न पनि सक्दैनन भन्ने प्रमाणीत भैसक्यो । अझै पनि हामी यिनीहरुबाटै देशको भविष्य खोज्यौँ भने त्यसले देशका लागि ठुलो दुर्घटना निम्त्याउछ ।
अव हामी आफूले आफूलाई चिनौ र यो देश बनाउने शाहसिक काममा अगाडी बढौ । अझै शंका छ भने अगाडी आएर नियालेर हेर्ने जमर्को गरौ । अझै सकिदैन जस्तॊ लाग्छ भने गरिरहेका विवेकशील युवालाई साथ दिनुहोस । विवेकशील नेपालीले कार्यकर्ता खोजेका हैनौ, यो देशलाई अब चाहिने नेतृत्व खोजेका हो, जुन कुरा तपाई हामी भित्रै छन् त्यसलाई चिनाउन मात्रै खोजेका हौ ।
डाक्टर के सीले मागेका कुरा तपाई हामीलाई व्यक्तिगत लाग्न सक्छ, किन कि उनले व्यक्तिको राजिनामा मागेका छन् । कुरा व्यक्तिको मात्रै हैन, त्यो व्यक्तिले सम्हालेको पदको हो । जसले उनीहरुलाई फेरी त्यहि अयोग्य डाक्टरको उत्पादन गर्ने दिशामा निर्देशित गर्दछ । अहिले डिन र उपकुलपति राजनैतिक भागबन्डाबाट त्यहाँ पुगेका हुन् । यो सबैलाई थाहा छ । जब कि त्यहाँ पुग्ने छुट्टै बरिष्ठताको आधार छ । उनीहरुलाई नै किन ल्याइयो त भन्दा राजनैतिक पार्टीहरुको स्वार्थ पूर्तिकालागि, सम्बन्धन पाउन अड्किएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन जारी गर्न र माथेमा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क वृद्धि गर्नकै लागि यी बफादार पात्रहरुलाई उपयोग गरिएको हो र जसको नतिजा अन्त्यमा गएर फेरी उही अयोग्य डाक्टरको उत्पादन नै हो ।
डाक्टर के सीको टाउको दुखाईनै यस्तै अयोग्य डाक्टर बजारमा छ्यापछ्यापति हुनेछन र अकालमा नेपालीहरुले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्नेछ भन्ने हो । कसैसंग व्यक्तिगत दुस्मनी निकाल्नु हैन उनलाई ।
अहिलेबाटै धेरै ठाउँहरुमा हामीले समाचार सुन्नु परेको छ कि डाक्टरको लापरबाहीले बिरामीले ज्यान गयो, एक ठाउँमा भनेर गरेको अप्रेसन अर्कै ठाउँमा परेको आदि इत्यादी र बिरामीका आफन्तले कहिले डाक्टरलाई कुट पिट गरेका छन् त कहिले हस्पिटल जलाउने लगायतका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दैछन् । हो यस्तै घटना अब आउदा वर्षहरुमा झन् वृद्धि हुनेछ र हर घर परिवारले यो समस्या भोग्नुपर्ने छ । त्यति बेला धेरै ढिला भैसकेको हुनेछ । किनभने त्यति बेलासम्म वर्षको २००० डाक्टरका दरले करिब १२००० देखि २०००० सम्म डाक्टर बजारका साना देखि ठुला हस्पिटलमा काम गरिरहेको हुनेछन् ।
त्यस पछि कस कसलाई हटाउने हामी ?
कस कसको मात्रै बिरोध गर्ने ?
कस कस लाई मात्रै पिट्नेरमार्ने ?
योग्यता त ऊसंग पनि उत्तिकै हुन्छ जुन कि अरु डाक्टरसंग हुन्छ । हिजो अस्तिनै हामीले नक्कली डाक्टर प्रकरणको कथा हेरीसक्यौ अनि बुझी पनि सक्यौ । फेरी किन हामी आफ्नै स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने CERTIFIED ज्यानमारा उत्पादनमा रोक लगाउन सक्दैनौ ?
यो पुस्ताले रोक लगाउन त परै जाओस एक महापुरुषले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर गरेको सत्याग्रहमा पनि बेवास्था गरी मौन बसेको छ, मानौ डाक्टर के सीले आफ्नो भत्ता बढाउनु पर्छ भनेर सत्याग्रह गरेको जस्तो । जब जब दानवको बर्चस्वो बढेर जान्छ तब तब हरेक युगमा भगवानको जन्म भाको कुरालाई हामी पक्कै नकार्न सक्दैनौ ।
भगवान पनि सधै मानबकै रुपमा प्रकट भएर दानवलाई अन्त्य गरेको कुरा पनि सबैलाई थाहा छ । यस समयको भगवान डाक्टर गोविन्द के सी हुन् भन्दा अन्योचित नहोला । डाक्टर के सी मरे उनि एक्लै मर्नेछन् तर सारा नेपाली बाँचेर पनि मरेतुल्य हुनेछन ।